MX Linux 19: Navoaka ny kinova vaovao miorina amin'ny DEBIAN 10 | Avy amin'ny Linux
MX Linux 19: Navoaka ny kinova vaovao miorina amin'ny DEBIAN 10
Tamin'ny fotoana hafa nosoratanay «MX Linux» ao amin'ny Blog (Jereo ny lahatsoratra teo aloha). Ary ireo dia nanjary nazava taminay, satria tsy miova mandraka androany toerana voalohany amin'ny vavahady DistroWatch. Na izany aza, andeha hotadidintsika izany «MX Linux» Izany dia Fitsinjarana GNU / Linux izany dia teraka vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny Developers sy ny mpampiasa ny Communities an'ny 2 hafa, izany hoe, Anti-X y MEPIS.
«MX Linux» miavaka amin'ny maro, satria ireo Fiaraha-monina ireo dia nanome ny fitaovana tsara indrindra ananany sy ny talentany hamoronana un Fitsinjarana GNU / Linux maivana nefa matanjaka, namboarina teo ambanin'ny foto-kevitra momba ny fanolorana a birao kanto sy mahomby miaraka amina fanamboarana tsotra, fitoniana avo lenta ary fampisehoana matanjaka. Ary izany rehetra izany dia amin'ny haben'ny sary ISO izay kely ampy ho an'ny fampidinana, fampiasana ary fametrahana mora foana.
Ity dia tsara sy miasa Fitsinjarana GNU / Linux manana fiaviany, hoy ny DistroWatch, Greek and American North (Greece / USA), na izany aza amin'ny inidialy «MX» inoana matetika fa manana fiaviana Meksikana izy. Raha ny tena izy, ny dikan'ireo litera 2 ireo dia avy amin'ny fiasan'ny atambatra ny litera voalohany an'ny MEPIS amin'ny litera AntiX farany, noho izany dia tandindona ny fiaraha-miasa eo amin'ireo Vondrom-piarahamonina 2 niorenany sy ny firenena an-dàlam-pandrosoana.
Io koa dia namela azy tafiditra ao amin'ilay tranonkala DistroWatch, amin'ny maha-kinova ny antiX, fa eo ambanin'ny azy pejy toy ny fizarana irery miaraka amin'ny famoahana ny MX Linux 16 beta ho an'ny daholobe voalohany, 2 Novambra 2016. Ary mandraka androany, ny tetikasa dia eo amin'ny «versión 19» antso «Patito Feo», izay hotantarainay fohifohy ao aoriana. Na dia raha te hahalala bebe kokoa aza ianao «MX Linux» afaka mandeha any amin'ny anao ianao tranokala ofisialy ary jereo ny fampahalalana ofisialy rehetra misy ary ampidino ny ISO azy.
1 MX Linux 19: Duckling mahatsiravina
1.1 Fanavaozana ny rindranasa ivelany
1.2 MX ny fanavaozana ny fampiharana azy
1.3 AntiX fanavaozana ny fampiharana azy manokana
1.4 Hafa isan-karazany
MX Linux 19: Duckling mahatsiravina
Araka ny tranonkala ofisialin'i «MX Linux», ity «versión 19» o «Patito Feo» Izy io dia manana ireto toetra manaraka ireto, fampandehanana ary programa:
Fanavaozana ny rindranasa ivelany
Repositories: Ahitana ireo ho an'ny DEBIAN 10.1 (Buster), AntiX ary MX Linux.
Tontolo iainana Desktop: Xfce 4.14
Mpanonta Imagen: GIMP 2.10.12
Trano famakiam-boky: TABELA 18.3.6
Firmware: Fanavaozana isan-karazany.
kernel: Dikan 4.19
Mpilalao horonantsary: VLC 3.0.8
Mpitantana mozika (mpilalao): Clementine 1.3.1
Mpanjifa mailaka: Thunderbird 60.9.0
Office Suite: LibreOffice 6.1.5 (Miaraka amin'ny patch fiarovana azy ireo)
Fampiharana hafa: Nohavaozina avy amin'ny DEBIAN sy MX Linux Repositories misy.
MX ny fanavaozana ny fampiharana azy
Installer: Miorina amin'ny Gazelle Installer (Gazelle), nampiana fanitsiana mahitsy ho an'ny fitantanana ny fizotry ny famolavolana sy ny fizarazarana.
Daty sy ora: Fanovana izay manamora ny fanatanterahana ny asa amin'ny famantaranandro System.
Famolavolana USB: Fampiharana amin'ny fitantanana ireo lahasa fikirakirana fitaovana fitehirizana USB.
Fametrahana fonosana: Ankehitriny dia misy ny fampisehoana ny isa kinova ho an'ny fampiharana Flatpak. Ho fanampin'izay, ny fanavaozana ny LibreOffice dia azo alaina ao amin'ny DEBIAN Backports Repositories.
Fanairana: Fonosana handefasana hafatra vonjy maika amin'ireo mpampiasa rafitra.
Updater: Tsy mila tenimiafin'ny mpandrindra intsony izany hijerena ireo fanavaozana miandry fa mbola mila ampiharina.
Sary: Ahitana fananana vaovao.
Bash configurator (Bash-config): Fampiharana vaovao natokana hanatsarana ny fampisehoana an-tsary ny tontolon'ny bash sy ny fikirakirana solonanarana ao.
Fanamboarana baoty: Nohavaozina mba hanohanana (fanitsiana) ireo firaketana fahasimbana maro samihafa.
Lohahevitra Desktop: Ahitana lohahevitra vaovao manokana.
Fiovana isan-karazany: Fanavaozana kely ao amin'ny sisa amin'ny MX Linux Tools, fampidirana ny ankamaroan'ny fisie fanampiana amin'ny sary ISO, safidy FAQ nohavaozina miaraka amin'ireo fandikan-teny tafiditra.
AntiX fanavaozana ny fampiharana azy manokana
Fanavaozana ny Live AntiX System, ao anatin'izany ny fikirana horonan-tsary.
Fampidirana boot fanombohana lahatsoratra fampahalalana.
Manamboatra amin'ny haavo maody fanombohana horonan-tsary "azo antoka" ao amin'ny menio mivantana boot.
Fanatsarana ny fanohanan-toerana: Saika ny rindranasan'ny tompona MX rehetra izao dia misy fanavaozana ny fandikana.
Araka ny hitantsika «MX Linux» dia Distribution GNU / Linux izay manolotra endrika sy fotodrafitrasa vaovao marobe ho an'ny Community Community. Ary izany dia «versión 19» antso «Patito Feo», dia fiakarana an-tsehatra lehibe avy amin'ny kinova taloha izy io, satria mitondra antsika ny fototr'ilay DEBIANINA 10 ho an'ny fanovana lavitra sy fanavaozana momba azy io. Eny, mampiasa na tia mampiasa izy ireo «MX Linux», atolotray ireo vondrona ireo telegrama momba izany mba hahafahan'izy ireo manatevin-daharana sy mizara traikefa amin'ity lafiny ity: MX amin'ny teny espaniola, MX Linux & AntiX Espaniôla y Tetikasa Tic Tac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » MX Linux 19: Navoaka ny kinova vaovao miorina amin'ny DEBIAN 10
Chrome 78 tonga miaraka amin'ny DNS mihoatra ny HTTPS, ny fanaingoana ny sary any ambadika ary maro hafa
Ubuntu Touch OTA-11 tonga miaraka amin'ny fanatsarana ny fitendry amin'ny efijery sy maro hafa